CentOS 7 kuburitswa kwemwedzi waMarch | Linux Vakapindwa muropa
CentOS 7 ine vhezheni nyowani inowanikwa, iri raMarch vhezheni, iyo inounza pakati pezvimwe zvinhu kugadziridzwa kwesoftware uye kugadzirisa bug
Nhasi, zvakaziviswa kuti iyo Kurume vhezheni yeimwe yeanonyanya kufarirwa masisitimu anoshanda, CentOS 7.
Isu tinoti vhezheni yemwedzi waMarch nekuti CentOS, senge mamwe masisitimu anoshanda seArch Linux, inoshandisa iyo Rolling Release nzira yekugadzirisaNdokureva, panzvimbo pekuwana makuru akakwirisa pese pese, vanoburitsa diki diki mwedzi wega kuti iyo yekushandisa system igare iri yazvino uye haifanirwe kuumbwa.
Iyi nyowani nyowani inotarisira pakati pezvimwe zvinhu, kugadzirisa kuchengetedzwa kwetupukanana uye zvikwata zvakaonekwa mwedzi wapfuura, sezvo zvichikosha kugadzirisa zvese zvikanganiso murudzi urwu rwekushandisa system kudzivirira zvakashata zvakakura.
Zvakare zvingave sei neimwe nzira, iyi yekuvandudza Iyo inogadzirisazve rese software iyo CentOS 7 inounza, kuunza yazvino software inovandudzwa yesoftware ese mapurogiramu anoshandiswa neCentOS.
Kana iwe wanga usingazive CentOS, iri sisitimu inoshanda iyo eIyo yakavakirwa pane inozivikanwa Red Hat Linux Enterprise, imwe yeakanakisa mashandiro eLinux aripo uye anga ari nhau nguva pfupi yadarika yekubhadharisa $ 2000 bhiriyoni mugore rimwe chete. Iyi inoshanda system inobhadharwa uye ane rutsigiro rwemakore gumi, zvisinei, ivo vachangobva kuburitsa chipo izvo zvichaita kuti ive yemahara kune vanogadzira.
Kudzokera kuCentOS, inongova yakasununguka chigamba kubva kuRed Hat, kuvaka pairi uye kushandisa yakafanana software. Zvisinei, CentOS zvakasununguka chose uye inochengetwa nekuda kwenharaunda yevashandisi vanobatsira kuichengetedza.
Kana iwe uine CentOS yakaiswa, nekuda kweRolling Release unogona kugadzirisa pasina kuita fomati. Kana izvi zvisiri izvo, unogona kurodha yazvino vhezheni kubva ku peji yepamutemo, kugona kusarudza pakati zvitatu ISO zvimiro zvemifananidzo zvinoenderana nesaizi yaunoda (Minimum, Standard uye Yakazara).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo yaMarch vhezheni yeCentOS 7 yabuda
Nhau dzakanaka. Ndiri kutozviziva kuti ndiite iyo LPI certification.
Pindura kuna Osandnet
CentOS Kutenderera zvakare? Icho chinhu chimwe kuburitsa shanduro dzekuchengetedza (senge iyi) uye yakanyanya imwe mhando yaunotaura. RHEL painoburitsa vhezheni itsva, pachave neiyo CentOS vhezheni.